Ny Tontolo Mahagaga Hafahafan’ny Raim-pianakaviana iray Mpikarakara Tokantrano no Sady Mpiondana Youtube · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2017 7:59 GMT
Sary : Pixabay, narafitr'i Kevin Rothrock
Ampolony amin'izao fotoana izao ireo lahatsary mozikaly afaka jerena ao amin'ny fantsona YouTube Kids Learning Tube, izay andefasan'ny Amerikana iray tsy mitonona anarana ireo sarimiaina ampiasàna ny mozika ho fanabeazana, efa ho taona roa izao. Angamba mety tsy dia ho mahaliana loatra izany, saingy amin'izao fotoana izao ilay fantsona dia manana mpanjohy maherin'ny 60.000 ary efa in-60,1 tapitrisa mahery ireo lahatsary nalefany no nisy nijery.
Mitety izao tontolo izao ireo lohahevitra voizin'ny hira ; na izany aza marobe ireo lahatsary no voahaingon'ireo sarintanim-pirenena samy hafa aseho ho toy ny manana endrika miaina, raha ny sasany kosa miresaka momba ireo lohahevitra mifangaroharo, ‘métalloïdes’, ireo kintana fonentana, ny tendrontraotraoka, ny tatavia, ny vola dolara amerikana, Thomas Edison, ny tyrannosaure, ary maro hafa.
Ny 23 Desambra, hira iray maharitra dimy minitra miresaka ireo lohahevitra 85 momba ny Federasiona Rosiana no napetraky ny Kids Learning Tube. Amin'ny ora nanoratako ireto andàlana ireto, efa nihoatra ny 186.000 ny nijerena ilay lahatsary. Hita ao anatin'ilay hira ireo tononkira toy ny ”Izahay no 9 Krais / Izahay no faritany ao Rosia / Ianaro miaraka aminay ny anaranay / Manome toky aho fa tsy hisy ny tsindry.”
Sarotra hazavaina ny fahombiazana voaporofo azon'ity lahatsary ity sy ireo rahavaviny marobe ao amin'ny Youtube. Anaty lahatsoratra iray niresaka momba ireo sarimiaina ireo, nokilasian’ny tranonkalam-baovao rosiana Meduza ho “tena hafahafa” ireo hira ireo.
Hitako ny nisy ilay lehilahy nanoratra ireny hira ireny sy namorona ireo sarimiaina. Nilaza tamiko izy ny mba hitahirizana ny mombamomba azy tsy ho fantatra mandra-pahazoany mpamandrika miisa iray tapitrisa ao amin'ny Youtube. Nolazainy fa voady nataony tamin'ireo mpianany io tao amin'ny Kids Learning Tube.
Azoko natao ny nahafantatra hoe raimpianakaviana mpiangaly mozika sy mpamorona sarimiaina, ary mpikarakara tokantrano miaina ao Etazonia izy. Ambarany fa “noforoniny io fantsona io mba hahafahan'ireo ankizy mianatra dieny hatrany amin'ny taona taona azo anisihan-javatra ao an-tsainy sy taona anangonan'izy ireny zavatra betsaka araka izay tratrany. Fony teraka ny zanako, tsy nahita na inona na inona tao amin'ny Youtube aho ka hoe mba mitondra fanabeazana ary ampy hahasarika ny ankizy hahafahan-dry zareo hianatra zavatra. Araka izany, noho ny fiofànana ara-mozika azoko ary taorian'ny nampianarako tena momba izay fomba hanaovana sarimiaina, nanapaka hevitra aho ny hanomboka. Mandeha tsara izany hatreto.”
Ary rehefa milaza io rangahy io fa nahita tokoa fahombiazana ety anaty serasera, tsy hoe manatavy resaka izy : tena betsaka tokoa ny olona no manaraka ny Kids Learning Tube ka mahatonga ilay lahatsariny mandritry ny 40 minitra malaza indrindra ho toy ny fantina fitetezana ny masoandro sy ny tontolo feheziny. Efa maherin'ny in-7 tapitrisa izy io no nisy nijery.
Milaza ralehilahy fa antenainy ny hamorona hira momba ny haibolantanin'ny firenena tsirairay ary hamoaka lahatsary iray vaovao isaky ny Zoma. “Ny tontolo andro aho manaraka akaiky ny fiainan'ny zanako, ary ny alina aho miasa. Araka izany, tsy afaka mamokatra afa-tsy lahatsary iray isankerinandro aho” hoy izy nanazava tamiko, toy ny hoe tsy efa mahatalanjona iny ery ny asa vitany ao amin'ny Youtube.
Rehefa nanontaniako azy ny antony mahatonga azy hamokatra lahatsary momba an'i Rosia, dia niaiky izy fa dindo napetraky ny tontolo politika ankehitriny ao Etazonia taminy io, no sady mandà hatrany ny tsy haneho hevitra momba ny politika. “Nibahana fotsiny izao ny lohahevitra momba an'i Rosia, indrindra fa nisy ny fifidianana amerikana natao tsy ela akory izay sy ny sahoan-dresaka momba ny mety ho nijirihan'i Rosia sy nandisoany ny vokatra. Tsy dia haiko loatra izay marina sy diso, raimpianakaviana tsotra fotsiny aho, izay miezaka mampianatra zavatra an-janako sy ny hafa.”
Rehefa nomarihako taminy hoe somary miteraka resabe ilay hirany momba an'i Rosia, indrindra fa miresaka ny fitakiana zaratany ataon'i Maosko any Krimea ilay izy, sy ao Sébastopol, faritany izay mbola heverin'izao tontolo izao, na farafaharatsiny ny maro, ho tafiditra ao anatin'i Okraina, somary gaga ilay lehilahy ao ambadiky ny Kids Learning Tube.
“Ny sarintanin'i Rosia ihany no narahako, dia izay” hoy izy nanazava.
Izay manazava amin'ny ampahany ny fahombiazana azon'ireny lahatsary ireny dia tsy isalasalàna fa ny dindo amerikana hafahafa amin'ny fomba nanaovana ny sarintanin'ireo faritra maro manerana ny tany. Ao anatin'ilay hira rosiana, feno ihany koa hadisoana mivandravandra amin'ny fomba fanoratra, toy ny hoe “Akory, Tsetsenina aho ary izaho Tchouvache” (raha tokony ho “Tsetsenia aho ary izaho Tchouvachie”), toy ny hoe tafiditra ara-bakiteny ho anisan'ireo foko vitsy an'isa tokoa ny faritra sasany ao Rosia.
Na izany aza, izany no toa hita fa tian'ilay rosiana mpanao gazety, Vassili Sonkine, izy izay namorona lahatsary iray mihodinkodina ao amin'ny Coub.com -n'i Tchétchénie an'ny Kids Learning Tube izay manao fanolorana, isak'izay mihetsika.
Saingy tsy hoe zavatra hafahafa fotsiny ety anaty aterineto ireny lahatsary mozikaly ireny ; raha nifanakalo hevitra tamin'ilay mpamorona ny fantsona, sarotra ny tsy ho voasariky ny fitiavana manetsika ny asany. Ary lazainy fa tsapany ny tsy mahalavorary ny fomba fanonony. “Na dia tsy mahomby hatrany isaky ny manao zavatra aza aho, dia miezaka manome izay tsara avy amiko.”
Hazavainy fa fanamarihana hitany ny hoe eny amin'ireo ankizy telo hatramin'ny efatra taona no tena mandeha ireo hirany. “Heveriko fa ny hira no tsiambaratelon'ny fianarana. Mahasondriana izany ary efa ampy sahady hanintona, anananao ny taharo tonga lafatra mba hampianarana zavatra amin'ny olona rehetra.”
Taorian'ny nitafàna tamin'ity raimpianakaviana mpiangaly mozika-mpanao sarimiaina ity, nasehoko ny zanako vavy enina taona ilay lahatsary momba an'i Rosia. Nitsiky izy teo ampijerena azy, ary niteny tamiko taty aoriana kely fa tiany tokoa ilay izy. “Tiako be ireo loha sy hira mahatsikaiky” hoy izy nanazava tamiko.
Raha tianao ireo lahatsarin'ny Kids Learning Tube ary irianao ny hanohana ilay fantsona, azonao atao ny mividy ireo hira ao amin'ny iTunes mba ho afaka mihaino azy ireny amin'ny fotoana rehefa tianao. Misanda 10 dolara ny rakikira “Learning Songs and Sing Alongs“.